Nezvedu - Wuxi Qian Iye Trading Co., Ltd.
Isu tine yakasimba timu yehunyanzvi iyo ine zvakapfuma zviitiko mune dzakasiyana machining maitiro, zvigadzirwa uye pamusoro kurapwa. Tine vashandi makumi matanhatu, vashandi vehunyanzvi gumi neshanu parizvino, uye vakagara vachiramba vakabatana pamwe neNanjing yunivhesiti yesainzi & tekinoroji.Yakatsunga kuchengetedza nyika inotungamira mukugadzirisa zvigadzirwa zvemotokari.
Wuxi Qian Iye ari kuita yakakwira-chaiyo uye epamusoro-kuomarara mashandiro ezvikamu 'machining
Mutengi Wedu Mukuru
Mutengi wedu mukuru anobva kumotokari, zvekurapa, munda weoiri uye indasitiri yemishini.
Isu tinovavarira kuve yehunyanzvi mutengo-kudzora uye mhinduro mupi kune edu tarisiro vatengi kusangana kusangana uye kuhwina-kuhwina mhedzisiro.
Bhizimisi redu guru rinosanganisira: iyo chaiyo machining yealuminium alloy, ndarira, simbi isina chinhu, titanium, mainjiniya plasitic uye kuburitsa kwesimbi isimbi uye alumium alloy investment castings. Kunyanya kugadzirwa kwetitanium zvikamu.
Isu tine zvigadzirwa zvekushandisa zvekugadzira uye kuongorora zvakadai seCCN milling centre, CNC lathes, kumhanya kwemotokari lathes uye CMM, purojekita, axiality yekuyera midziyo uye imwe yepamusoro yekuongorora zvirinzvimbo.Yedu nzvimbo yebhizinesi inovhara pasi, nekutarisa kuNorth America uye Nyika dzeEurope nekuda kwekunaka kwemhando yezvigadzirwa zvedu, isu takakurudzirwa zvakanyanya nevatengi vedu.
Yedu bhizinesi nzvimbo inovhara pasirese, tichitarisa kuNorth America neEuropean nyika.Nekuda kune yakanakisa mhando yezvigadzirwa zvedu, isu takakurudzirwa zvakanyanya nevatengi vedu. Zvese izvi zvinotibatsira kuti titaurirane newe uye tinzwisisane pane zvaunoda uye nezvatinogona kusangana nazvo.
Mutengi wedu mukuru anobva kumotokari, zvekurapa, munda weoiri uye indasitiri yemishini. Zvakadai seAPR, SPX, Ingersoll Rand zvichingodaro.
Isu tinogara tichivimbisa yakakodzera uye yakawedzerwa kukosha sevhisi.